Vaovao - Anton-javatra misy fiantraikany amin'ny herin'ny havizanan'ny fitaovam-pitrandrahana vy tsy mitongilana
Antony miantra amin'ny havizanan'ny herin'ny fantsom-by vy mirindra
Ny tanjaky ny havizanana amin'ny fantsona vy tsy mitongilana avy any Shandong Derunying dia mora tohina amin'ny lafin-javatra ivelany sy anatiny isan-karazany, izay ahitana ny endrika, ny habeny, ny malama ary ny toetoetran'ny serivisy na ny toy izany ireo singa anatiny, ary ny ao anatiny dia misy ny firafitra, firafitra, fahadiovana, adin-tsaina sisa tavela sy ny sisa amin'ny fitaovana ihany. Ny fiovana misimisy an'ireto anton-javatra ireto dia hiteraka fiovan'ny toetr'andro na fahasamihafana mihoapampana amin'ny fahombiazan'ny fitaovana.
Ny fitaoman'ireo zava-misy amin'ny tanjaky ny havizanana dia lafiny iray lehibe amin'ny fikarohana harerahana. Ity fikarohana ity dia hanampy amin'ny famolavolana ireo firafitry ny ampahany sahaza azy, ny fisafidianana ireo fitaovana fantsona vy tsy misy seamless ary ny famolavolana teknika fanodinana mangatsiaka sy mafana samihafa, izay manome antoka fa hahavita be an'ireo faritra ireo.
1. Ny fiantraikan'ny fifantohana amin'ny adin-tsaina
Araka ny mahazatra, ny tanjaka havizanana dia azo amin'ny alàlan'ny fandrefesana amin'ny alàlan'ny santionany malama. Na eo aza izany, ny takelaka samihafa, toy ny dingana, ny làlambe, ny kofehy, ary ny lavaka menaka sns, dia misy tsy azo ihodivirana amin'ireo faritra mekanika tena izy. Ny fisian'ireny sombin-kazo ireny dia miteraka fifantohan'ny fihenjanana, izay mahatonga ny fihenjanana farany ambony indrindra amin'ny fototr'ilay toerana tsy dia lehibe lavitra noho ny adin-tsaina naterak'ilay ampahany, ary matetika dia manomboka ny tsy fahombiazan'ny reraka amin'ilay ampahany.
Ny coefficient fifantohana teorika teôtika Kt: ny tahan'ny tsindry faran'izay avo indrindra amin'ny fihenjanan'ny anarana amin'ny fakan'ny notch azo araka ny teôlôjika elastika ao anatin'ny tarehin-javatra elastika tsara.
Coefficient fifantohana mahasalama (na coefficient ny adin-tsaina havizanana) Kf: tahan'ny fetra havizanana σ-1 amin'ny santionany malama amin'ny fetran'ny havizanana σ-1n amin'ny santionany naoty.
Ny coefficient fifantohana adin-tsaina mahomby dia tsy ny haben'ny habe sy ny endrik'ilay singa ihany no voataona, fa ny toetra ara-batana amin'ny fitaovana, fanodinana, fitsaboana hafanana ary anton-javatra hafa.
Ny coefficient fifantohana adin-tsaina mahomby dia mitombo miaraka amin'ny hamafin'ny fefy, fa mazàna kely kokoa noho ny coefficient fifantohana teoretika.
Ny coefficient ny fahatsapana ny havizanana q: ny coefficient ny fahatsapana ny faharerahana dia manondro ny fahatsapana ny fitaovana amin'ny fihenan'ny havizanana ary isaina amin'ny raikipohy manaraka.
Ny habetsaky ny angona q dia 0-1, ary ny kely kokoa dia q, ny tsy dia mora tohina dia ny fantsom-by fantsom-by amin'ny volo. Ny fanandramana dia mampiseho fa ny q dia tsy fitoviana ara-materialy fotsiny, ary mbola misy ifandraisany amin'ny habeny; Ny q dia tsy misy ifandraisany amin'ny notch raha tsy ny radius notch dia lehibe kokoa noho ny sanda iray, ny sanda radius dia tsy mitovy amin'ny fitaovana samihafa na ny toeran'ny fanodinana.
2. Ny fitaoman'ny habe
Noho ny heterogeneity sy ny lesoka anatiny ny fitaovana, ny fitomboan'ny habeny dia hampitombo ny mety tsy fahombiazan'ny fitaovana, amin'izay hampihena ny fetran'ny havizanan'ny fitaovana. Ny fisian'ny effet habe dia olana lehibe amin'ny fampiharana ny angon-draky ny havizanana azo tamin'ny alàlan'ny fandrefesana ny santionany kely ao amin'ny laboratoara ho an'ny ampahany amin'ny tena habeny. Tsy azo atao ny misolo tena feno sy mitovy ny fifantohana amin'ny adin-tsaina, ny gradienin'ny adin-tsaina na ny toy izany amin'ny haben'ny tena izy, noho izany ny valin'ny laboratoara sy ny tsy fahombiazan'ny havizanan'ny faritra sasany dia mifamatotra.
3. Ny fiantraikan'ny satan'ny fanodinana ambony
Ny marika milina tsy mitovy dia misy eo amin'ny masinina hatrany. Ireo marika ireo dia mitovy amin'ny fiakarana kely izay miteraka fifantohana amin'ny alàlan'ny soritr'aretina, ary hampihena ny tanjaky ny havizanan'ny fitaovana. Ny fitsapana dia mampiseho fa, ho an'ny alika vy sy aliminioma, ny fetran'ny reraka amin'ny fametahana masinina (fihodinam-be) dia ambany noho ny famolavolana tsara hatramin'ny 10% -20% na mihoatra. Ny avo kokoa dia ny tanjaky ny fitaovana, arakaraky ny maha-marefo azy io amin'ny famolavolana ambonimbony.